Kenya oo Xabsiga Dhigtay Dhalinyaro Lala Xiriiriyay Kooxda Daacish – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Kenya oo Xabsiga Dhigtay Dhalinyaro Lala Xiriiriyay Kooxda Daacish
Dowlada dalka Kenya ayaa xabsiga dhigtay labo qof oo kenyaati ah kuwaa oo dowlada turkiga dalkeeda ay ka’soo masaafurisay kadib markii la’ogaaday in kooxda daacish ee dalka Syria in ay tababar ka’soo qaateen.
Philip Tuimur oo ah madaxa booliiska magaalo xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya ayaa sheegay in dadkan dowlada turkiga u soo gacan gelisay police-ka Kenya ay yihiin wiil iyo gabar kuwaa oo imika baaritaano uu ku socda iyaga oo lagu heysto ku biiritaanka kooxda ISIS.
Dowlada Kenya ayaa waxa sheegtay in dhalinyaro badan oo dalkeeda u dhashay in ay tabo bar ka’helaan kooxaha islaamiyiinta kadib shaqo la’aan baahsan oo dhalinta dalkaasi soo wajahday.
Waxaana dowlada Kenya ay sheegtay in waxa loogu yeero kooxaha argagixisada in imika ay isku dayayaayn in unugyo katirsan kooxahaasi laga abuuro bariga qaarada Africa iyagoo isticmaalaya nidaamyo kala duwan.
Waxaa sidoo kale dowlada Kenya ay sheegtay in dhalinyaro kenyati ah ay u safreen dalalka Syria iyo Libya si ay ugu biiraan kooxaha halkaa ka dagaalamaya ay daacish kamid tahay.